I-Google imangalelwa ngokuqoqa ngasese idatha evela kubasebenzisi be-Android | Kusuka kuLinux
I-Google imangalelwa ngokuqoqa ngasese idatha evela kubasebenzisi be-Android
Njengoba isihloko sithi icala elisha elibhekene inkampani iMountain View, California. NgoLwesine, Novemba 12, 2020, uJoseph Taylor, u-Edward Mlakar, uMick Cleary no-Eugene Alvis, bafaka isimangalo eNkantolo yesiFunda sase-United States eSan José, besola -Google ukweba imininingwane yabasebenzisi be-Android ngokudluliswa okufihliwe nokungathembekile kumaseva abo.
Ngokwesikhalazo, inkampani isebenzisa ngasese izilinganiso zedatha yeselula yabasebenzisi be-Android ukuze idlulise imininingwane ngabo.
Kumele futhi kuqashelwe ukuthi I-Google idizayine isistimu yokusebenza ye-Android ukuqoqa ulwazi oluningi olumayelana nabasebenzisi. Ngale ndlela, ukhiqiza izinkulungwane zezigidi zenzuzo ngonyaka ngenkathi uthengisa ukukhangisa kwedijithali okubhekiswe kukho. Kepha ukwenza lokhu, i-web giant kufanele futhi iphuce ngokungemthetho impahla yalaba basebenzisi, kufaka phakathi imininingwane yabo yocingo.
“Empeleni, i-Google iphoqa laba basebenzisi ukuthi baxhase ukubhekwa kwayo ngokuhlela ngasese amadivayisi e-Android ukudlulisa njalo imininingwane yomsebenzisi ku-Google ngesikhathi sangempela, ngaleyo ndlela kubekwe idatha ebalulekile yeselula ethengwe abasebenzisi. IGoogle yenza lokhu, ngezinga elikhulu, ukuze izuze ngokwezimali, futhi ngaphandle kokwazisa abasebenzisi noma ukucela imvume yabo, ”kufundeka isikhalazo.
Lokhu kushintshana okuyimfihlo ayibhekisi nakancane kwimininingwane ethunyelwe nge-Wi-Fi.
Kusukela isikhalazo sikhombisa icala lapho kusebenza khona kudatha ethunyelwe ngokuxhumeka kwamaselula uma ingekho i-Wi-Fi uma kwenzeka umsebenzisi we-Android ekhetha uhlelo oluxhunywe kunethiwekhi.
Eqinisweni, abamemezeli bakhathazeka kakhulu ngemininingwane ethunyelwa kumaseva weGoogle, ngoba akuwona umphumela wokusebenzisana ngamabomu nedivayisi yeselula.
“AbakwaGoogle baklame futhi basebenzise uhlelo lwabo lokusebenza lwe-Android nezinhlelo zokusebenza ukukhipha nokudlulisa imininingwane emikhulu phakathi kwamadivayisi eselula abakhalazi kanye neGoogle besebenzisa izabelo zedatha yabamangali. Ukudunwa kwe-Google ukwabiwa kwedatha yesicelo sabamangali ngokudluliswa okungenziwanga kwenzeka ngemuva, akuwona umphumela wokuxhumana okuqondile kwabamangali nezinhlelo zokusebenza ze-Google nezakhiwo kumadivayisi abo, futhi kwenzeka ngaphandle kwemvume yabamangali, ”kusho isikhalazo.
Lokhu kudluliswa kwedatha okwenziwa kwenziwa ngezindlela ezintathu ezihlukile.
Okokuqala kwenzeka lapho amadivayisi eselula esesimeni sokulala ngokuphelele (zonke izinhlelo zokusebenza zivaliwe).
Owesibili, odlulisa ivolumu enkulu, wenzeka lapho amadivayisi eselula emile futhi ephelele, kepha ngohlelo olulodwa noma ngaphezulu luvulekile futhi alusetshenziswanga.
Okwesithathu, okudlulisa imininingwane eyengeziwe, kwenzeka lapho abasebenzisi basebenzisa i-Android yabo, bexhumana nayo, bevakashela amakhasi ewebhu noma besebenzisa izinhlelo zokusebenza.
Ukuqinisekisa lezi zinsolo, ukuhlaziywa okuthunywe ngabameli babamangali wenze ukuhlolwa kudivayisi entsha yeselula ye-Samsung Galaxy S7 ngenkathi kulungiswa izilungiselelo ezijwayelekile ezizenzakalelayo.
Ikhompyutha ixhunywe ku-akhawunti entsha ye-Google futhi ayixhumekanga ku-Wi-Fi. Umphumela wokuhlolwa ukukhombisile lokho le divayisi, esesimeni sokulala, “ibithumela futhi ithola u-8.88MB ngosuku ngemininingwane futhi i-94% yalokhu kuxhumana iphakathi kweGoogle nedivayisi.
Umakhalekhukhwini, lapho zonke izinhlelo zivaliwe, udlulise imininingwane isiya noma isuka kwaGoogle cishe izikhathi eziyi-16 ngehora, okulingana nezikhathi ezingama-389 emahoreni angama-24.
Ucwaningo lukaSolwazi Douglas C. Schmidt lwango-2018 lokuqoqwa kwemininingwane yakwaGoogle luthole nokuthi idivayisi ye-Android ishintshisana ngolwazi neGoogle noma ngabe ifoni ayisebenzi. I-tech giant kuthiwa idlulisa idatha yokwenziwa cishe izikhathi ezingama-900 emahoreni angama-24, isilinganiso esiphindwe izikhathi ezingama-38 ngehora uma uhlelo lokusebenza lwe-Chrome beluvulekile.
Indlela ephelele ye-athikili: Kusuka kuLinux » Izaziso » I-Google imangalelwa ngokuqoqa ngasese idatha evela kubasebenzisi be-Android
Umbuzo uwukuthi ... Ingabe kuyinto ethakazelisa ngempela iningi labasebenzisi? Ngabe ikhona enye indlela yangempela engathumeli idatha enkulu evela kuma-mobiles ethu?
Njengamanje, njengenye indlela yangempela, kune-e / OS kuphela, ngoba kukhona ne-Lineage Os, kepha ngicabanga ukuthi abasusi ingxenye kadoti i-Android enayo, exhuma kumaseva weGoogle.
ezinye izindlela: i-pinephone noma i-librem5
Kunembile, yize ngisalinde umthengisi lapha ezweni lakithi, ngoba wayengawathembi amasiko noma uhlelo lokuthumela imiyalezo ...